Dhacdo argagax leh oo maanta ka dhacday magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dhacdo argagax leh oo maanta ka dhacday magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan
Wararka naga soo gaaraya magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta halkaasi ay ka dhacday dhacdo aad u xanuun badan, kadib markii nin hubeysan uu rasaas ku furay dad shacab ah oo halkaasi ku sugan.
Ninkaasi oo ilaa iyo haatan aan la ogeyn sababta uu dadkaasi u rasaaseeyay ayaa hadane dadka qaar waxay sheegayaan in dhacdadaan ay la xiriirto aano qabiil oo mudooyinkii ugu dambeysay ka taagneed magaalada B/weyne iyo duuleedkeedaba.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa ku sheegay Maxamed Makaraan ayaa inoo sheegay in ninkaasi uu weerar kusoo qaaday dadkaasi shacabka ah, xilli ay fadhiyeen xeradii hore ee ciidanka daraawiishta ee ku taala bartamaha magaalada B/weyne.
Ninkaasi ayaa markii uu falkaasi geystay kadib islamarkiiba goobta isaga baxsaday, waxayna dadka qaarkood sheegayaan in arrintaan ay la xiriirto aanooyin qabiil oo u dhaxeeysa laba beelood oo halkaasi wada-degan.
Dhinaca kale, agaasimaha isbitaalka magaalada B/weyne Axmed Maxamed Khaliif oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in 4 qof oo dhaawac ah lasoo gaarsiiyay isbitaalkaas.
Wuxuu sidoo kale agaasimaha sheegay in mid ka mid ah afartaas qof ee dhaawaca ah uu dhaawaciisa yahay mid aad u culus, islamarkaana ay rasaasta kaga dhacday dhinaca madaxa.
“Afar qof oo dhaawac ah ayaa nala soo gaarsiiyay, mid ka mid ah dadkaasi ayaa qaba dhaawac halis ah, rasaas ayaa dhinaca madaxa kaga dhacday, haatane waxaa lagu daaweynayaa isbitaalka” Sidaas waxa yiri Axmed Maxamed Khaliif.
Ugu dambeyntii, ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka magaalada B/weyne, oo ay kaga hadlayaan dhacdadaan argagaxa leh oo maanta ka dhacay magaaladaasi, waxaana hadal heynta maanta ee magaaladaasi ay noqotay dhacdadaan halkaasi ka dhacday.